हे, मान्छे नमस्ते!!! तपाईं जस्तै आफ्नो मनमा कुनै प्रश्न छ भने how to get access to 192.168.0.1 आईपी ​​ठेगाना? र तपाईं बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ 192.168.0.1 लग - इन प्रक्रिया, if yes then you don’t need to wonder or get worried anymore? cause here in this article of mine Article, म तपाईंले पहुँच गर्न सबै विधि र प्रणाली भन्नेछु 192.168.0.1.
के हो 192.168.0.1?
192.168.0.1 isaprivate IP address of Internet Protocol version4(IPv4) नेटवर्क (यो पनि कम्प्युटर विज्ञान मा होस्ट ठेगाना रूपमा चिनिने). It is the default configuration IP address of wireless routers or ADSL (Asymmetric डिजिटल सदस्यहरूले रेखा) Netgear जस्तै कम्पनीहरु द्वारा उत्पादित मोडेम, डी-लिङ्क, Tp-लिंक, र अरूले. यी routers को व्यवस्थापन कन्सोल यो भ्रमण गरेर पहुँच गर्न सकिन्छ 192.168.0.1 तपाईंको ब्राउजरमा आईपी ठेगाना.
कसरी मा लग इन 192.168.0.1?
सबै को ➥ पहिलो, एक तार वा वायरलेस जडान मार्फत आफ्नो कम्प्यूटर वा ल्यापटप गर्न राउटर जडान.
➥ अर्को, open any Web browser on your computer and manually type the address 192.168.0.1 on the browser address bar then after press the enter, र तपाईं लगइन पृष्ठ देख्ने.
➥ यो पृष्ठ मा, तपाईंले सही प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ.
म मेरो रूटर गर्न लगिन गर्न सक्दैन, के गर्ने?
If you typing 192.168.0.1 ब्राउजर मा तर यो त काम गर्दैन 192.168.0.1 तपाईंको राउटर को आईपी ठेगाना हो
➥ If you useaMac — Go to Applications > उपयोगिता > टर्मिनल. एक पटक तपाईं टर्मिनल हुनुहुन्छ, प्रकार"ipconfig" and > प्रविष्ट.
➥ विन्डोज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने — Runasearch on your computer for Command Prompt (सीएमडी) . एक पटक आदेश बक्स खुला छ, प्रकार "ipconfig" and > प्रविष्ट.
सेट कसरी माथि लागि पहिलो पटक ताररहित राउटर?
सबै को ➥ पहिलो, लैन आफ्नो राउटर आफ्नो कम्प्युटर जडान (स्थानीय क्षेत्र सञ्जाल) तार.
➥ अब तपाईंको कम्प्युटरमा ब्राउजर खोल्न र https प्रविष्ट://192.168.0.1 ठेगाना पट्टीमा.
➥ त्यसपछि लग इन पृष्ठ देखा पर्नेछ. अब
➥ अर्को आफ्नो राउटर फेरि सुरु गर्नुहोस् र SSID सेट (सेवा सेट पहिचायक) नाम. यसलाई अन्य उपकरणहरू देखाइने छ कि आफ्नो राउटर को नाम हुनेछ.
➥ त्यसपछि नेटवर्क सुरक्षा सेटिङहरूमा पासवर्ड सेट.
➥ अब, अर्को बटन क्लिक गर्नुहोस्.
रूटर सेटिङ बचत गर्न थप एक समय रिबुट ➥.
➥ अब, तपाईँले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वायरलेस नेटवर्क सेवा सेट पहिचायक लागि (SSID) आफ्नो ल्यापटप वा फोन संग नाम. अब पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्, र यो आफ्नो राउटर इन्टरनेट जडान जडान गरिनेछ.
एक लगइन पासवर्ड डी लिंक वायरलेस राउटर लागि सेट
सबै को ➥ पहिलो ब्राउजर खोल्न र https प्रविष्ट://192.168.0.1 ठेगाना पट्टीमा.
को mauntenance बटन ➥ अर्को क्लिक
➥ त्यसपछि व्यवस्थापक बटन क्लिक गर्नुहोस्
अब आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन ➥
➥ सुधारे बटन पासवर्ड क्लिक परिवर्तन पछि.
➥ अब तपाईं नयाँ पासवर्ड संग लगिन गर्न सक्नुहुन्छ.
मलाई लाग्छ यो बारेमा पर्याप्त जानकारी हुनु पर्छ 192.168.0.1 लग - इन. मलाई आशा छ कि तपाईं तर तपाईं यो पोस्ट सन्दर्भमा कुनै पनि समस्या सामना यदि उपयोगी जानकारी को सबै प्रकार, त्यसपछि कृपया सकेसम्म हामी आफ्नो समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नेछ हाम्रो लागि टिप्पणी. हाम्रो साइट भ्रमण को लागि धन्यवाद.
192.168.0.1 लग - इन
Previous Post:192.168.1.1 || कसरी लग इन 192.168.1.1 आईपी ​​ठेगाना?
Next Post:के छ 192.168.0.0 आईपी ​​ठेगाना?